5 အဓိကသုတေသန Institution များ
၁။ ဆီလီကွန်သုတေသနရှန်ဟိုင်းအင်စတီကျု၊ တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ
2. Henan ပြည်နယ် Microcrystalline Oxide အင်ဂျင်နီယာနည်းပညာစင်တာ
3. Henan လုပ်ငန်းနည်းပညာစင်တာ
4. Zhengzhou Fine ကြွေအင်ဂျင်နီယာနည်းပညာစင်တာ
၅။ Zhengzhou Oxide Powder Engineering Technology စင်တာ
ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခန်း၊ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်စမ်းသပ်ခန်း၊ လုပ်ငန်းခွင်ဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်လျှောက်လွှာဓာတ်ခွဲခန်းများရှိသည်။ အမျိုးမျိုးသော alumina ဝိသေသလက္ခဏာများရှိသောသုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုစနစ်ကိုပြီးပြည့်စုံသောစက်ကိရိယာများနှင့်နည်းလမ်းများဖြင့်ဖွဲ့စည်းသည်။
အဆင့်မြင့် R & D စမ်းသပ်ခြင်းပစ္စည်း
၁။ Japan Electronic Scanning Electron Microscope
2. ဂျာမနီ Sympatec လေဆာအမှုန် Sizer
3. မြန်နှုန်းမြင့်တိကျသောမျက်နှာပြင်နှင့် aperture ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း
5. 1700 ℃ကြွေပစ်ခတ်မှုစမ်းသပ်လျှပ်စစ်မီးဖို
၁။ ရှန်ဟိုင်းကြွေထည်ဆိုင်ရာအင်စတီကျု၊ တရုတ်သိပ္ပံအကယ်ဒမီ
Sinosteel ၏ 2.Loyoy Refractory သုတေသနအင်စတီကျု
4. ပစ္စည်းအင်ဂျင်နီယာကျောင်း၊ Henan နည်းပညာတက္ကသိုလ်
၅။Shanghai Baosteel သုတေသနဌာန
ဤနယ်ပယ်များတွင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသည်စက်မှုလုပ်ငန်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို ဦး ဆောင်။ YUFA Group ၏ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲသောဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ခိုင်မာသောနည်းပညာပံ့ပိုးမှုပေးသည်။
YUFA သည်ကုန်ပစ္စည်းအားလုံးအရည်အသွေးစစ်ဆေးခြင်းကိုခံယူပြီးနောက်မှသာရောင်းနိုင်ကြောင်းအမြဲတမ်းအခိုင်အမာပြောဆိုသည်။ YUFA တွင်ကိုယ်ပိုင်အရည်အသွေးရှိသောစစ်ဆေးရေးဓာတ်ခွဲခန်းနှင့်အရည်အသွေးစစ်ဆေးရေးဝန်ထမ်းများရှိသည်။ စက်ရုံမှထွက်သောကုန်ကြမ်းများ၊ မီးပြင်းဖိုအရည်ပျော်ခြင်း၊ အကြိုအချောထည်ပစ္စည်းများ၊ ကြိတ်ခွဲခြင်းများအထိစက်ရုံမှထွက်သောနောက်ဆုံးအချောထည်ပစ္စည်းများအထိ YUFA သည်မတူညီသောဆေးပမာဏအရစစ်ဆေးမှုများကိုပြုလုပ်ပြီးကုမ္ပဏီနှင့်လိုက်ဖက်သည့်စစ်ဆေးခြင်းစံနှုန်းများနှင့်ပေါင်းစပ်သည်။ အနိမ့်ဆုံးစစ်ဆေးမှုအရေအတွက်သည် ၁၀ ကြိမ်ဖြစ်ပြီးအမြင့်ဆုံးစစ်ဆေးမှုသည် ၄၀ ကျော်ပြုလုပ်နိုင်သည်။
မှတ်ချက် - အသုတ်တန်ချိန် ၂၀ ကျော်သည့်အခါနမူနာများကိုသုတ်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သည်။
စက်ရုံမှထုတ်ကုန်များကိုစံသတ်မှတ်ချက်များအရစစ်ဆေးသင့်သည်။ ပစ္စည်းအားလုံးသည်နည်းပညာဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီပါကထုတ်ကုန်များအစုကိုအရည်အချင်းပြည့်မှီစေသည်။ အရည်အသွေးကြီးကြပ်မှုနှင့်စစ်ဆေးမှုပြုလုပ်နေစဉ်အတွင်းစစ်ဆေးသည့်ထုတ်ကုန်များသည်အမှုန်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးကိုခွဲခြားထားသည်။ ကျပန်းသူတို့ထံမှနမူနာများအတွက်အမှုန်အရွယ်အစားကိုရွေးချယ်ပါ။